အနုပညာသတင်း Archives - Padaethar
ပိုင်တံခွန် ဖမ်းခံရခြင်းမှာ မန်နေဂျာမလေး May Chit thway ကြောင့်ဟု ဝေဖန် မူများရှိနေ
နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၅၀၅ က နဲ့ စစ်ကောင်စီ က တရားစွဲ ပြီး ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ခံထားရတဲ့မော်ဒယ် ပိုင်တံခွန် ကို ဒီနေ့ ဧပြီ ၈ ရက် မနက် ငါးနာရီခန့်က မြောက်ဒဂုံ နေအိမ်မှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့ ပိုင်တံခွန် ရဲ့ အမ ဖြစ်သူက လူမှုကွန်ရက်မှာ ရေးသား ထားပါတယ်။ စစ်ကား ၈ စီး၊ အင်အား ၅၀ ကျော်နဲ့ လာရောက်ဖမ်းဆီး သွားတာဖြစ်ပြီး ဖမ်းခံရချိန်မှာ နေမကောင်းဖြစ်နေတယ် လို့လည်း သူက ရေးသားပါ တယ်။ ပိုင်တံခွန်ဟာ မနေ့ ဧပြီ ၇ ရက် ည ၈ နာရီသတင်းမှာ ၅၀၅ က နဲ့ တရားစွဲခံရတဲ့စာရင်း စစ်ကောင်စီက … Read more
မိခင်က စ.စ်ေ.ပြးရင်း ဆုံ.းသွားခဲ့တဲ့အတွက် တစ်ယောက်ထဲက.ျန်ခဲ့တဲ့ ရခိုင်က ကလေးငယ်လေး သူမထံ ရောက်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ပရဟိတမင်းသမီး ခိုင်နှင်းဝေ။
မိခင်က စ.စ်ေ.ပြးရင်း ဆုံ.းသွားခဲ့တဲ့အတွက် တစ်ယောက်ထဲက.ျန်ခဲ့တဲ့ ရခိုင်က ကလေးငယ်လေး သူမထံ ရောက်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ပရဟိတမင်းသမီး ခိုင်နှင်းဝေ။ သရုပ်ဆောင်ခိုင်နှင်းဝေကတော့ ပရိသတ်တွေကြားမှာ ပရဟိတမင်းသမီးအဖြစ် နာမည်ကြီးလေးစားခံနေရသူတစ်ယောက်ပါ။ အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းက အခက်အခဲဖြစ်နေကြသူများနဲ့ စားဝတ်နေရေး မပြေလည်သူများကိုလည်းတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ကူညီလှူဒါန်းပေးနေသူပါ။ ခိုင်နှင်းဝေရင်သွေးလေးများဂေဟာကို တည်ထောင်ထားပြီး ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကို စွမ်းစွမ်းတမံ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လူမမယ်ကလေးငယ်လေးများကိုလည်းနွေးထွေးမှုအပြည့်နဲ့ ခေါ်ယူမွေးစားကာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ ပရဟိတသူရဲကောင်းတစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ထားလေးကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေက လေးစားအားကျနေကြတာပါ။ အခုတစ်ခါမှာလည်းမင်းသမီး ခိုင်နှင်းဝေက “ဖခင်က တာဝန်မယူဘဲ စ.ွန့်ပ.စ်ထားပြီး မိခင်က စ.စ်ေ.ပြးရင်း ဆုံ.းသွားခဲ့တဲ့အတွက် တစ်ယောက်ထဲကျန်ခဲ့တဲ့ သားငယ်လေး”ကို ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်မွေးစားဖြစ်တဲ့အကြောင်း မနေ့က သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ “ဖခင်က တာဝန်မယ.ူပဲ စ.ွန့်ပ.စ်ထားပြီး မိခင်က စ.စ်ေ.ပြးရင်း ဆုံ.းသွားခဲ့တဲ့အတွက် … Read more
Categories KNOWLEDGE, အနုပညာသတင်း
မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင် ပိုင်တံခွန် ဖမ်းဆီထိန်းသိမ်းခံရပြီ
မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင် ပိုင်တံခွန် ဖမ်းဆီထိန်းသိမ်းခံရ ယနေ့ နံနက်ပိုင်းမှာ ပုဒ်မ ၅၀၅ က ထုတ်ခြင်းခံထားရတဲ့ မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင် ပိုင်တံခွန် ကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ ပိုင်တံခွန် ရဲ့ အစ်မ ဖြစ်သူက အခုလိုရေးသားထားတာပါ။ ဒီနေ့ မနက် ၅နာရီမှာ ရဲနဲ့စစ်သား ကား 8 စီးနဲ့ ပိုင်တံခွန်ကို လာဖမ်းသွားကြပါပြီ…. မြောက်ဒဂုံအိမ်မှာ လာဖမ်းသွားတာပါ… Speak Out များများလေး လုပ်ပေးကြပါ…. ကျန်းမားရေး အရမ်းဆိုးနေလို့ ဝိုင်းဝန်းဆုတောင်းပေးကြပါဦးဗျာ… Edit.. နေမကောင်းအရမ်းဖြစ်နေလို့ အမေတို့ဆီ ခဏ လာနေနေတာပါ… PaingTaKon / Akonthi unicode မျောဒယျလျ သရုပျဆောငျ ပိုငျတံခှနျ ဖမျးဆီထိနျးသိမျးခံရ ယနေ့ နံနကျပိုငျးမှာ ပုဒျမ … Read more
ဘယ်သူ့ခွင့်ပြုချက်မှမပါဘဲ သူ့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုပြောပြလာတဲ့ ပိုင်တံခွန်
March 26, 2021 by Padaethar
ဘယ်သူ့ခွင့်ပြုချက်မှမပါဘဲ မှန်တယ်ထင်လို့ လုပ်နေတာဆိုပြီး သူ့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုပြောပြလာတဲ့ ပိုင်တံခွန် ပရိသတ်ကြီးရေ.. မော်လ်ဒယ်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးအဖြစ် ပြည်ပနိုင်ငံတွေအထိပါ ….အောင်မြင်မှုတွေအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ ပိုင်တံခွန်ကတော့ လက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ပူးပေါင်းပါဝင်ကာ အားလုံးနဲ့အတူရပ်တည်နေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။ ဖေဖော်ဝါရီလ(၁)ရက်နေ့ကတည်းက တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲကြီးမှာ ရှေ့ဆုံးကနေ မားမားမတ်မတ်နဲ့ တက်ကြွစွာပါဝင်ပြီး လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလုပ်ဆောင်နေတဲ့ ပိုင်တံခွန်ကတော့ ဖြိုခွင်းမှုတွေကြောင့် လတ်တလောမှာ ရှောင်တိမ်းနေရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။ ဘယ်သူ့ခွင့်ပြုချက်မှ မပါဘဲမှန်တယ်ထင်လို့ လုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီး အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပေမယ့်လည်း နိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ အကောင်းဆုံးကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုလည်း ပြောပြလာပါတယ်..။ ပိုင်တံခွန်ကတော့ သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကို အလွယ်တကူမယုံကြဖို့နဲ့ အိမ်ထဲမှာမုန်းတီးစိတ်တွေနဲ့ တစ်ချိန်လုံးမနေဘဲ ရှေ့ဆက်ဖို့အားအင်တွေအတွက် ကိုယ်ပိုင်အချိန်နဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုလည်း ပြန်ပေးရမယ်ဆိူပြီးတော့လည်း ပြောပြထားပါသေးတယ်..။ “အမြဲတမ်းလည်းပြောတယ် ကျနော့်page က မတင်ရင် ဘာသတင်းမှ မယုံဖို့ နိုင်ငံ့ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာ မလိုအပ်တာတွေ page မှာ … Read more
ပြေတီဦးမှ မိမိပိုင် ငွေများကုန်ချင်ကုန်ခမ်းသွားပါစေ KNU ကို ထောက်ပံ့ကူညီပြီး နွေဦးတော်လှန်ရေး အောင်မြင်အောင် ဆက်လုပ်မည်ဟု ပြော
ဒွေး နှင့် နို့စို့ဖက် ပြေတီ ဦးမှ မိမိပိုင် ငွေများကုန်ခြင်ကုန်ခမ်းသွားပါစေ KNU ကို ထောက်ပံ့ကူညီပြီး နွေဦးတော်လှန်ရေး အောင်မြင်အောင်ဆက်လုပ်မည်ဟု ပြောကြား အမြန်လမ်းနှင့် မော်လမြို င်ကို ပြေတီ ဦးမှရှော့ တိုက်ဒုံးများပစ်ပေးရန် KNU ဟောင်းစောဩဂတ် ကို သိန်းနှစ်သောင်းဖြင့် ငှါးရမ်းဟု သတင်းထွက်ပေါ် ငှက်ဖျား ရောဂါ ဝင်နေတဲ့ပြေတီဦးကို မဲဆောက်ဒေါက်တာစင်သီယာမောင် ဆေးကုခန်းမှာ ကုသနေရာက CIA ဟုယူဆရသူများမှ လာရောက်ခေါ်ဆောင်ပြီး ဘန်ကောက် အထူးကုဆေးရုံကြီးတခု မှာ အရေးပေါ်ကုသစေခဲ့ပါတယ် ၊ ကုန်ကျ ငွေားလုံးကို ယင်းအဖွဲ့မှ အကုန်အကျ ခံပေးခဲ့ပါတယ် ၊ လက်ရှိ KNU တပ်မဟာ ၅. ခေါင်းဆောင်ဘောကျော်ဟဲ … Read more
သူမဆီကို ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကမှားဝင်လာပြီး မြိတ်မြို့နားကသတင်းတွေကို ပြောပြခဲ့တာကြောင့် ပြန်လည်ဝေမျှလာတဲ့ ပိုးမမှီသာ
သူမဆီကို ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကမှားဝင်လာပြီး မြိတ်မြို့နားကသတင်းတွေကို ပြောပြခဲ့တာကြောင့် ပြန်လည်ဝေမျှလာတဲ့ ပိုးမမှီသာ သရုပ်ဆောင် ပိုးမမှီသာကတော့ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်နေသူတစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ အမှန်တရားဘက်ကနေ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်နေသူဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေက လေးစားနေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှတစ်ဆင့်လည်း အရေးကြီးတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ ဝေမျှပေးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ညကလည်း ပိုးမမှီသာရဲ့ Facebook အကောင့် တွင် သူမဆီကို ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကမှားဝင်လာပြီး မြိတ်မြို့နားကသတင်းတွေကို ပြောပြခဲ့တာကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းကို ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ” မနက်က မသိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုဝင်လာတယ် ပုံမှန်ဆိုရင်တော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မသိတဲ့နံပါတ်ဆိုသိပ်မကိုင်ဖြစ်ပေမယ့်ဒီနေ့တော့ကိုင်လိုက်မိကြောင်းသူမကိုင်မိလိုက်တဲ့အခါမှာ ” ပဲခူးကကျွန်တော့သူငယ်ချင်းဖုန်းလားလို့ဆက်ကြည့်တာပါခင်ဗျာ ဖုန်းနံပါတ်သေချာမမှတ်ထားမိလို့မှတ်မိသလောက်နှိပ်ပြီးဆက်ကြည့်တာပါတဲ့ ဘယ်ရောက်သွားလဲ” ဆိုပြီး တစ်ဖက်မှပြောလာတာကို ပိုးမမှီသာအနေနဲ့ ဘယ်ရောက်လဲမပြောလိုတာကြောင့် “ဖုန်းမှားနေတယ်”လို့ဆိုပြီးချဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်းသူ့ရဲ့ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့အကူအညီမဲ့နေတဲ့လေသံကြောင့်ချက်ချင်းမချလိုက်ပဲဆက်နားထောင်မိလျက်သားဖြစ်သွားရာက သူဆက်ပြောလာတာတော့“တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့နယ်မှာအင်တာနက်လည်းမရှိတော့အကုန်လုံးဘာမှမသိဖြစ်နေတာနဲ့ ဆက်မိတာပါတဲ့”စိတ်ထဲတော်တော်လေးမကောင်းဖြစ်တာနဲ့ … Read more
သရုပ်ဆောင်လူမင်းအကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်…
သရုပ်ဆောင်လူမင်းအကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်… ဖမ်းဆီးခံရပီးရက်ပေါင်းများစွာ အဆက်အသွယ်ပျက်နေပီနောက် မှာ ကိုလူမင်းကို ကျန်းမားရေးဆိုးဝါးတဲ့ သတင်းမှားတွေကြောင့် ဇနီးဖြစ် သူခင်စံပယ်ဦးက သူနဲ့ အဆက်အသွယ် ရနေတုန်းမှာ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေတဲ့အကြောင်း စိတ်မပူကြဖို့ သတင်းထုပ်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သတင်းအနေနဲ့ အန်ကယ်လေးကို လူထုဘက်က ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ကာ ရပ်တည် ပေး ခဲ့တဲ့အတွက် ညှင်းပန်းမှူ့ တွေခါးစီးခံနေရတယ်လို့ စုံစမ်းမှုတွေအရသတင်းများ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ အိမ်ကပို့ပေးတဲ့ အစားအသောက်တွေလည်းမစားရပဲသူတို့ကြွေးတဲ့ဆန်ကြမ်းတွေနဲ့ဟင်းအသိုးတွေအစားအသောက် တွေကလည်း စားလို့မရနိုင်အောင်ဆိုးရွားနေတဲ့အကြောင်း ပြောပြချက်တွေအရ သိရှိရပါသည်။ ကိုလူမင်းကို ကောင်းကောင်း ပေးမအိပ်ပဲ ညဘက် တွေကို အလှည့်အကျ အစောင့် တွေက အိပ်တာနဲ့ နိူးပီး အိပ်မ ရအောင် ဒေါက် လျောက်လုပ်ဆောင်နေတာ ကြာလာတော့ အစားမမှန် အအိပ်မမှန်နဲ့ လက်ရှိမှာ ကိုလူမင်းကို စိတ်ငြိမ်ဆေး တိုက်ပီး … Read more
“တာဝန်အရထမ်းဆောင်တာထက် အမုန်းတရားတွေပါနေတယ်” ဆိုတဲ့ မင်းမော်ကွန်း
“တာဝန်အရထမ်းဆောင်တာထက် အမုန်းတရားတွေပါနေတယ်” ဆိုတဲ့ မင်းမော်ကွန်း ပရိသတ်ကြီးရေ.. သရုပ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်းကတော့ လက်ရှိအခြေအနေတွေမှာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ တစ်သွေးတစ်သားတည်းရပ်တည်နေပြီး တာဝန်သိပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အင်တိုက်အားတိုက်ပါဝင် လုပ်ဆောင်နေသူပါ..။ မင်းမော်ကွန်းကတော့ လမ်းပေါ်ထွက်လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အပြင် လှူဒါန်းမှုတွေမှာ တတ်နိုင်သလောက် ပြုလုပ်နေပြီး လူငယ်တွေကိုလည်း ဖေးမအားပေးရင်း တော်လှန်ရေးကြီးမှာအဖက်ဖက်ကနေ ပါဝင်နေ သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။ အခုလိုအချိန်မှာ သူ့အနေနဲ့ မိသားစုနဲ့ခွဲခွာပြီးနေ နေရတာက အသက်ပေးပြီး တစ်သက် လုံးခွဲသွားရတဲ့ ပြည်သူတွေထက်စာရင် လေးစားရတဲ့ညီငယ် ညီမငယ်တွေထက်စာရင် ဘာမှမပြောပလောက်ပါဘူးဆိုပြီးတော့လည်း ခံးစားချက်တွေကို ရင်ဖွင့်ပြောပြလာပါတယ်..။ လူငယ်တွေလုပ်နေတာတွေကလည်း အထွေအထူးပြောစရာမလိုအောင် တကယ့်လက်တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာ လူငယ်တွေရဲ့စဉ်းစားပုံ လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေက အရမ်းထက်မြတ်တဲ့အတွက် တိုင်ပြည်အတွက် အရမ်းအားရတယ်ဆိုပြီးတော့ ပြောပြလာတာ ဖြစ်ပါတယ်..။ ဖြိုခွင်းမှုတွေကလည်း ပြည်သူကိုဘယ်လောက်မုန်းတီးပြီး ဘယ်လောက်အငြိုးကြီးလည်းဆိုတာ ပြနေသလို သတ်လိုက်ရင်လည်း သားသမီးအရွယ်ကလေးတွေဖြစ်ပြီး ရိုးရိုးတန်းတန်းတာဝန်အရ ထမ်းဆောင်တာမျိုး … Read more
ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် လှူဖို့ကိုစိတ်အားထက်သန်လွန်းတဲ့ အချဉ်ပေါင်းသည်အန်တီကြီးကြောင့် အတွေးတစ်ခုရခဲ့တဲ့ ယွန်းယွန်း
March 15, 2021 March 15, 2021 by Padaethar
ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် လှူဖို့ကိုစိတ်အားထက်သန်လွန်းတဲ့ အချဉ်ပေါင်းသည်အန်တီကြီးကြောင့် အတွေးတစ်ခုရခဲ့တဲ့ ယွန်းယွန်း သရုပ်ဆောင် ယွန်းယွန်း ကလည်း ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေမှာ တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ပါဝင်အားဖြည့်နေတဲ့ ပြည်သူထဲက ပြည်သူတစ်ယောက်ပါ။ ယွန်းယွန်းက လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးမှာလည်း ပြည်သူတွေနဲ့အတူ သွားရောက်ဝန်းရံခဲ့သလို လိုအပ်နေတဲ့ နေရာတွေမှာလည်း ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုလည်း အများသိအောင် လူမှုကွန်ယက်ထက် မှာ ဝေမျှလေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ ခွန်အားဖြစ်စေမယ့် စာသားတွေနဲ့ သူမ ရဲ့ အမြင်ကိုလည်း Facebook Account ထက်မှာ တင်ပေးလေ့ရှိတာဖြစ်ပြီး မကြာသေးတဲ့ နာရီပိုင်း အချိန်ကလည်း ပိုစ့်တစ်ခုတင်ပေးလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ မုံရွာမြို့က အေးချမ်းတဲ့အပြုံးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ရိုးသားတဲ့ အချဉ်ပေါင်းသည်အန်တီကြီးကြောင့် အတွေးတစ်ခုရခဲ့တဲ့အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အန်တီကြီးက သူရောင်းချတဲ့ အချဉ်ပေါင်းတွေကို လူထုလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်နေတဲ့ … Read more
Categories အနုပညာများ, အနုပညာသတင်း